အခမဲ့ အွန်လိုင်းဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူ ကိရိယာများ - TOOLFK
2 တစ်ကြောင်းလျှင် ကိရိယာများ4 တစ်ကြောင်းလျှင် ကိရိယာများ5 တစ်ကြောင်းလျှင် ကိရိယာများ6 တစ်ကြောင်းလျှင် ကိရိယာများ7 တစ်ကြောင်းလျှင် ကိရိယာများ8 တစ်ကြောင်းလျှင် ကိရိယာများ9 တစ်ကြောင်းလျှင် ကိရိယာများ10 တစ်ကြောင်းလျှင် ကိရိယာများ
အွန်လိုင်း PHP Obfuscator
ဗီဒီယိုသို့ အွန်လိုင်း စာတို
အွန်လိုင်း QRCode Generator
အွန်လိုင်း WebSocket စမ်းသပ်သူ
အွန်လိုင်း CSS ကိရိယာများ
အွန်လိုင်း JSON ကိရိယာများ
အွန်လိုင်း HTML ကိရိယာများ
အွန်လိုင်း XML ကိရိယာများ
အွန်လိုင်း YAML ကိရိယာများ
အွန်လိုင်း Morse Code ဘာသာပြန်သူ
အသံသို့ အွန်လိုင်း စာတို
အွန်လိုင်း PDF to Image
အွန်လိုင်း SVG Converter
အွန်လိုင်း PHP Compiler
အွန်လိုင်း Python စုစည်းမှု
အွန်လိုင်း စာသား နှိုင်းယှဉ်မှု
အွန်လိုင်း CdnJs စာကြည့်တိုက်
အွန်လိုင်း SQL ပြောင်းလဲခြင်း
အွန်လိုင်း GPS Coordinates
အွန်လိုင်း HTTP REST
အွန်လိုင်း Unix Timestamp Converter
အွန်လိုင်း Base64/UrlEncode ကုဒ် ကုဒ်
အွန်လိုင်း CSV Converter
အွန်လိုင်းမှ မှတ်သားထားသော HTML Converter
အွန်လိုင်း ကုဒ်ဝှက်ခြင်းနှင့် စာသားကို ကုဒ်ဝှက်ခြင်း
အွန်လိုင်း Cron မီးစက်
အွန်လိုင်း URL အတိုကောက်
အွန်လိုင်း Groovy စုစည်းမှု
အွန်လိုင်း ဆွစ်ဖ် စုစည်းမှု
အွန်လိုင်း Elixir စုစည်းမှု
အွန်လိုင်း ပတ္တမြား စုစည်းမှု
အွန်လိုင်း Dart Compiler
အွန်လိုင်း Kotlin စုစည်းမှု
အွန်လိုင်း R စုစည်းမှု
အွန်လိုင်း Csharp စုစည်းမှု
အွန်လိုင်း Scala Compiler
အွန်လိုင်း Rust Compiler
အွန်လိုင်း Lua စုစည်းမှု
အွန်လိုင်း Java စုစည်းမှု
အွန်လိုင်း C Compiler
အွန်လိုင်း C++ စုစည်းမှု
အွန်လိုင်း Perl စုစည်းမှု
အွန်လိုင်း IP ရှာဖွေမှု
အွန်လိုင်း တရုတ် ID ကတ်
အွန်လိုင်း DNS ရှာဖွေမှု
အွန်လိုင်းမှ Curl ပြောင်းရန်
အွန်လိုင်း တရုတ်ဘဏ်ကတ် မေးမြန်းမှု
အွန်လိုင်း တရုတ်အမည် ဂျင်နရေတာ
အွန်လိုင်း Icp မှတ်တမ်း
အွန်လိုင်း ဝဘ်ဆိုဒ် စစ်ဆေးခြင်း
အွန်လိုင်း QQ မေးမြန်းမှု
အွန်လိုင်း ဂရပ်ဖစ် ကြံစည်မှု
Online Xiehouyu ထုတ်လုပ်သည်
အွန်လိုင်း PDF ကုဒ်ဝှက်ခြင်း
အွန်လိုင်းမှ PDF သို့ စာသားသို့ ပြောင်းရန်
အွန်လိုင်း TXT သို့ PDF Converter
အွန်လိုင်း PDF to Word Converter
အွန်လိုင်းမှ စကားလုံးကို PDF သို့ ပြောင်းရန်
အွန်လိုင်းမှ PPT သို့ PDF သို့ ပြောင်းပါ
အွန်လိုင်း PDF to PPT Converter
အွန်လိုင်း PDF to Excel Converter
အွန်လိုင်းမှ Excel သို့ PDF သို့ ပြောင်းရန်
အွန်လိုင်း PDF to HTML Converter
အွန်လိုင်း ရေးစပ်သူနှင့် စကားပြန်
အွန်လိုင်း ဝဘ်ဆိုဒ် ပေါင်းစည်းခြင်း
အွန်လိုင်း ဝဘ်ဆိုဒ် အလေးချိန်
အွန်လိုင်း Zhou မြို့စား
အွန်လိုင်း တရုတ် ပဟေဠိများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ PHP Encoder သည် သင့် PHP ရင်းမြစ်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သော အမည်များကို စာဝှက်နိုင်စေပါသည်။ နားလည်ရခက်အောင် PHP အတွက် online obfuscator ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် စံပြ
Python အွန်လိုင်း ကုဒ်ဝှက်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ, ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်သော ကုဒ်ဝှက်ခြင်း, Batch obfuscation ကုဒ်ဝှက်ခြင်း Python ၏ နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်သော ကုဒ်ဝှက်ရေးကိရိယာ
စာသားကို ဗီဒီယိုသို့ ပြောင်းပါ, မည်သည့်စာသားကိုမဆို အွန်လိုင်းအစစ်အမှန်ဗီဒီယိုအဖြစ် အလွယ်တကူပြောင်းပါ, စာသားတစ်ခုစီကို ဗီဒီယိုတွင် တစ်ကြောင်းချင်းပြသပါမည်, ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းကို အသုံးပြု၍ ဗီဒီယိုသို့ စာသားထည့်ပါ။
PHP Obfuscator, PHP အတွက် အွန်လိုင်း obfuscator Encryption/Decrypt လုပ်ခြင်းကို နားလည်ရခက်စေပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် စံပြဖြစ်သည်။
ဝဘ်ဆိုဒ်များကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ဒေတာအဖြစ် ပြောင်းလဲပါ။ တွားသွားပင့်ကူများနှင့် ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုလုံးမှ ပြီးပြည့်စုံသော ဖွဲ့စည်းပုံဒေတာကို ထုတ်ယူသည်, QueryList ကိုအခြေခံ၍ Crawler
Photoshop အွန်လိုင်း အခမဲ့ ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်သူ, PSD, XCP, ပုံကြမ်း (Photoshop, GIMP, နှင့် Sketch) သို့မဟုတ် အခြားပုံဖိုင်များကို ယခုစမ်းကြည့်ပါ။
သင်၏ကိုယ်ပိုင် QR ကုဒ်များကို အရောင်, ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် လိုဂိုဖြင့် ပြုလုပ်ရန် အခမဲ့ အွန်လိုင်း QR Code Generator
WebSocket Test Page Client,Online WebSocket & Socket.io Tester... ဤကိရိယာကို အသုံးပြု၍ မည်သည့် WebSocket ဆာဗာကိုမဆို စမ်းသပ်နိုင်သည်,
ဤအခမဲ့ ပုံမှန် စကားအသုံးအနှုန်း စမ်းသပ်သူသည် သင့်အား သင်ရွေးချယ်သည့် မည်သည့်ထည့်သွင်းမှုမျိုးနှင့်မဆို စမ်းသပ်နိုင်စေပြီး ကိုက်ညီမှုအားလုံးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မီးမောင်းထိုးပြနိုင်စေသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ အခမဲ့အွန်လိုင်းနှင့် အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသော CSS ကိရိယာ စုစည်းမှုကို ကြည့်ပါ, CSS ဖော်မတ်/သန့်စင်/ပိုကောင်းအောင်/ချုံ့/စာဝှက်ခြင်း, Css အွန်လိုင်းမှ လျှော့နည်းနှင့် Scss သို့ ကြည့်ပါ
JSON Formatter · JSON Parser · JSON Validator · JSON ကြည့်ရှုသူ · JSON မှ HTML/XML/YAML/CSV/TSV/JAVA/C# ကုဒ်
အခမဲ့ XML ကြည့်ရှုသူ - XML တည်းဖြတ်သူ - XML ဖော်မတ်တာ- XML စာကြောင်းများကို အဆင်ပြေစွာ ဖတ်နိုင်သော ဖော်မတ်သို့ ပြောင်းပါ, အသေးဆုံး, Json, Java, Csv, Yaml နှင့် HTML သို့ ပြောင်းပါ
YAML Tools Online · YAML Formatter · YAML Validate · Yaml Convert Json/XML/HTML/CSV Code, YAML ဖိုင်များတွင် အမှားအယွင်းများနှင့် သတိပေးချက်များကို ရှာဖွေပါ။
အခမဲ့ sequence diagram အွန်လိုင်းတူးလ်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူသော အင်တာဖေ့စ်ဖြင့် ဆွဲယူ၍ ချပေးခြင်းဖြင့် စာသားအမှတ်အသားကို အသုံးပြု၍ အစီအစဥ်ဇယားများကို ဖန်တီးပါ။
အွန်လိုင်း morse ကုဒ် ဂျင်နရေတာ, သုံးရလွယ်ကူသော Morse ကုဒ် ဘာသာပြန်သူ, Morse ကုဒ်ကို စာသားနှင့် Morse ကုဒ်သို့ စာသားသို့ ဘာသာပြန်ခြင်း, အွန်လိုင်းမှ Morse ကုဒ်နှင့် လက်တင်အက္ခရာအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း
ဤနေရာတွင် စာရိုက်ပါ, ကူးထည့်ကာ တည်းဖြတ်ပါ။ Natural Reader Online သည် စာသားမှ စကားပြောဝဘ်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး မည်သည့်စာသားကိုမဆို သဘာဝအသံထွက်ဖြင့် စကားပြောစကားလုံးအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည့် ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းမှ ရိုးရှင်းပြီး ရိုးရာတရုတ်ဘာသာသို့ ပြောင်းလဲခြင်း, RMB အရင်းအနှီးပြောင်းလဲခြင်း, စာလုံးပုံစံပြောင်းခြင်း, တရုတ်စာလုံးပြောင်းလဲခြင်း ပင်ယင်တူးလ်
အခမဲ့ Code-128 Generator- ဤအခမဲ့အွန်လိုင်းဘားကုဒ်မီးစက်သည် 1D နှင့် 2D ဘားကုဒ်အားလုံးကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ထုတ်လုပ်ထားသော ဘားကုဒ်ကို bitmap သို့မဟုတ် vector ပုံအဖြစ် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
PDF များကို အရည်အသွေးမြင့် JPG/PNG/WEBP ပုံများ သို့မဟုတ် TEXT ဖိုင်အဖြစ် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ပြောင်းလဲရန် အကောင်းဆုံး အွန်လိုင်း ဝဘ်အက်ပ်။ ဖိုင်အရွယ်အစား ကန့်သတ်ချက်မရှိသလို မှတ်ပုံတင်ရန် မလိုအပ်ပါ။
ဆော့ဖ်ဝဲကို ထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲ SVG ဖိုင်များကို PNG ပုံများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် ဤအခမဲ့အွန်လိုင်း SVG ကို PNG/WEBP converter ကို အသုံးပြုပါ။
ရေးပြီး တည်ဆောက်ပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ Php compiler ကို အခမဲ့ အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းတွင် ခေါင်းစဉ်ကုဒ်ကို ရေးပြီး ဖွင့်ပါ။ IDLE ကဲ့သို့ Php Shell ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး, ကျွန်ုပ်တို့၏ Php compiler တွင် ထည့်သွင်းမှုများကို ရယူပါ။
ရေးပြီး တည်ဆောက်ပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ Python compiler ကို အခမဲ့ အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းတွင် ခေါင်းစဉ်ကုဒ်ကို ရေးပြီး ဖွင့်ပါ။ IDLE ကဲ့သို့ Python Shell ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး, ကျွန်ုပ်တို့၏ Python compiler တွင် ထည့်သွင်းမှုများကို ရယူပါ။
Text Diffchecker! စာသားစာရွက်စာတမ်းနှစ်ခုကြား ခြားနားချက်ကို ရှာဖွေနိုင်သည့် online diff tool တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကူးထည့်ပြီး နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရုံပါပဲ။
ရိုးရှင်းသည်။ မြန်တယ်။ စိတ်ချရသော။ အကောင်းမွန်ဆုံး အကြောင်းအရာ ပေးပို့ခြင်း။ CDNjs သည် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး open-source CDN ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်
SQL သို့ JSON/XML/Csv/Yaml/HTML Converter သည် သင့်အား SQL သို့အွန်လိုင်းပြောင်းပေးပါသည်။ SQL ဖိုင်ကို ရွေးပါ သို့မဟုတ် SQL မေးမြန်းမှုများကို ထည့်သွင်းပြီး SQL ဖော်မတ် Compress သို့ ပြောင်းပါ။
GPS Coordinates finder သည် သင့်လိပ်စာ, စာတိုက်ကုဒ်, ပြည်နယ်, မြို့နှင့် လက်တင်ရှည် အပါအဝင် သင့်လက်ရှိတည်နေရာ၏ လတ္တီတွဒ်နှင့် လောင်ဂျီတွဒ်တို့ကို ရှာဖွေရန် အသုံးပြုသည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤဝဘ်ဝန်ဆောင်မှုစမ်းသပ်ခြင်းကိရိယာသည် API အွန်လိုင်းတွင် စမ်းသပ်ရန် ခွင့်ပြုသည်, သင်သည် http တောင်းဆိုချက်ကို အွန်လိုင်းတွင် ပြုလုပ်နိုင်သည်, အပလီကေးရှင်းသည် သတ်မှတ်ထားသော API အဆုံးမှတ်သို့ GET သို့မဟုတ် POST HTTP တောင်းဆိုချက်များကို ပေးပို့သည်။
ပရိုဂရမ်မာများအတွက် လွယ်ကူသော epoch/Unix timestamp converter။ Unix အချိန်တံဆိပ်ကို ဖတ်နိုင်သော ရက်စွဲ/အချိန်သို့ ပြောင်းပါ, Unix အချိန်တံဆိပ်တုံးနှင့် အခြားအချိန်ဖော်မတ်များကြားသို့ ပြောင်းပါ
အွန်လိုင်း Base64 ကို ပုံသို့ , သင်သည် Url ကုဒ် သို့မဟုတ် ကုဒ်ကို ပြောင်းနိုင်သည်, Ascii သည် Native/Asciit/Unicode သို့ ပြောင်းသည်, Unicode သို့ Ascii ပြောင်းလဲခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ
CSV Converter သည် အွန်လိုင်းစာရွက်စာတမ်းနှင့် စာရင်းဇယားပြောင်းသည့်စနစ်ဖြစ်ပြီး Toolfk က Csv Convert to JSON, XML,ASP, Mysql, PHP, Ruby, Python Code
သင်၏ အမှတ်အသားကို HTML သို့ လွယ်ကူသော အဆင့်တစ်ဆင့်ဖြင့် ပြောင်းပါ - အခမဲ့။ ... သင်၏ အမှတ်အသားကို ကူးထည့်ပါ သို့မဟုတ် ရိုက်ထည့်ကာ ၎င်းကို HTML အဖြစ် ပြန်ဆိုကြည့်ပါ။ ရလာတဲ့ HTML ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ သို့မဟုတ် ကော်ပီကူးပါ။
ဝန်ဆောင်မှုသည် Apache's .htaccess ကို nginx ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များအဖြစ် ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။ ပထမဦးစွာ, ဝန်ဆောင်မှုကို nginx converter သို့ mod_rewrite အဖြစ် ယူဆခဲ့သည်။
အဆင့်များပါရှိသော အခြေခံပြောင်းလဲခြင်းဂဏန်းတွက်စက်- binary,decimal,octal, hex ပြောင်းလဲခြင်း။ ... နံပါတ်ကို မည်သည့်အခြေခံမှမဆို အခြေသို့ပြောင်းပါ- နံပါတ်ထည့်ပါ။ အခြေခံမှ,
အွန်လိုင်း လျှို့ဝှက်ကုဒ်ရေးနည်း ကိရိယာ, အယ်လဂိုရီသမ် MD5, MACMD5, SHA1, SHA224, SHA3, AES, DES, Rabit, Rabit Legacy, RC4, RC4Drop, TripleDES, Ripemd160 ကုဒ်ဝှက်ခြင်းနှင့် စာဝှက်ခြင်း
AI Article spinner သည် 100% အခမဲ့ဖြစ်ပြီး, ၎င်းသည် အရည်အသွေးမြင့် ပြန်လည်ရေးသားခြင်းရလဒ်များကို ထုတ်လုပ်ပေးသည့် ဉာဏ်ရည်တုအခြေခံဝါကျပြန်လည်ရေးဆရာဖြစ်သည်။
Android Apk အပလီကေးရှင်းများကို ရှင်းထုတ်ပြီး Java ရင်းမြစ်ကုဒ်နှင့် အရင်းအမြစ်များကို ဖြည်ပါ, APK ဖိုင်များကို ခွဲထုတ်ခြင်းသည် လွယ်ကူစေသည်။
လွယ်ကူပြီး အခမဲ့ ဖန်သားပြင်ဓာတ်ပုံနှင့် ပုံမျှဝေခြင်း - ပုံများကို ပရင့်စခရင်ဖြင့် ကူးထည့်ခြင်းဖြင့် အွန်လိုင်းတွင် အပ်လုဒ်လုပ်ပါ သို့မဟုတ် ဆွဲချလိုက်ပါ။
လုံခြုံသော စကားဝှက်ကို ဖန်တီးပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရသော, ခိုင်ခံ့သော, ကျပန်းစကားဝှက်တစ်ခုကို ချက်ချင်းဖန်တီးရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အွန်လိုင်းစကားဝှက်ထုတ်ပေးသည့်စနစ်ကို အသုံးပြုပါ။
crontab အချိန်ဇယားများအတွက် အသုံးပြုရလွယ်ကူသော တည်းဖြတ်မှုတစ်ခု, ဤအခမဲ့အွန်လိုင်းတူးလ်က သင့်အား Quartz Cron စကားရပ်ကို ဖန်တီးနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဖတ်နိုင်သော စာသားဖော်မတ်ဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော URL များကို ဖန်တီးရန် အခမဲ့ URL အတိုချုံ့နည်း။ ShortURL သည် ရှည်လျားသောလင့်ခ်ကို လျှော့ချရန် url အတိုကောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သိပ္ပံဂဏန်းပေါင်းစက်, ပရိုဂရမ်မာ ဂဏန်းပေါင်းစက်
အခမဲ့အွန်လိုင်းမှ စိတ်မြေပုံဆွဲခြင်း ဝဘ်ပေါ်ရှိ အကျိုးအရှိဆုံး အွန်လိုင်း စိတ်မြေပုံ ကင်းဗတ်။ Freemind mindmap တင်သွင်း/တင်ပို့မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အခမဲ့ ဒေတာဘေ့စ် ဒီဇိုင်နာတူးလ်, သင်၏ ဇယားကွက်များကို အလွယ်တကူ မြင်နိုင်စေရန် ဒေတာဘေ့စ် ပုံကြမ်းတူးလ်ဖြင့် သင်၏ SQL ဒေတာဘေ့စ်ကို ဒီဇိုင်းဆွဲပါ။
ရေးပြီး တည်ဆောက်ပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ Groovy compiler ကို အခမဲ့ အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းတွင် ခေါင်းစဉ်ကုဒ်ကို ရေးပြီး ဖွင့်ပါ။ IDLE ကဲ့သို့ Groovy Shell ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး, ကျွန်ုပ်တို့၏ Groovy compiler တွင် ထည့်သွင်းမှုများကို ရယူပါ။
ရေးပြီး တည်ဆောက်ပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ Swift compiler ကို အခမဲ့ အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းတွင် ခေါင်းစဉ်ကုဒ်ကို ရေးပြီး ဖွင့်ပါ။ IDLE ကဲ့သို့ Swift Shell ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး, ကျွန်ုပ်တို့၏ Swift compiler တွင် ထည့်သွင်းမှုများကို ရယူပါ။
ရေးပြီး တည်ဆောက်ပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ Elixir compiler ကို အခမဲ့ အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းတွင် ခေါင်းစဉ်ကုဒ်ကို ရေးပြီး ဖွင့်ပါ။ IDLE ကဲ့သို့ Elixir Shell ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး, ကျွန်ုပ်တို့၏ Elixir compiler တွင် ထည့်သွင်းမှုများကို ရယူပါ။
ရေးပြီး တည်ဆောက်ပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ Golang compiler ကို အခမဲ့ အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းတွင် ခေါင်းစဉ်ကုဒ်ကို ရေးပြီး ဖွင့်ပါ။ IDLE ကဲ့သို့ Golang Shell ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး, ကျွန်ုပ်တို့၏ Golang compiler တွင် ထည့်သွင်းမှုများကို ရယူပါ။
ရေးပြီး တည်ဆောက်ပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ Ruby compiler ကို အခမဲ့ အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းတွင် ခေါင်းစဉ်ကုဒ်ကို ရေးပြီး ဖွင့်ပါ။ IDLE ကဲ့သို့ Ruby Shell ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး, ကျွန်ုပ်တို့၏ Ruby compiler တွင် ထည့်သွင်းမှုများကို ရယူပါ။
ရေးပြီး တည်ဆောက်ပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ Dart compiler ကို အခမဲ့ အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းတွင် ခေါင်းစဉ်ကုဒ်ကို ရေးပြီး ဖွင့်ပါ။ IDLE ကဲ့သို့ Dart Shell ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး, ကျွန်ုပ်တို့၏ Dart compiler တွင် ထည့်သွင်းမှုများကို ရယူပါ။
ရေးပြီး တည်ဆောက်ပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ Kotlin compiler ကို အခမဲ့ အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းတွင် ခေါင်းစဉ်ကုဒ်ကို ရေးပြီး ဖွင့်ပါ။ IDLE ကဲ့သို့ Kotlin Shell ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး, ကျွန်ုပ်တို့၏ Kotlin compiler တွင် ထည့်သွင်းမှုများကို ရယူပါ။
ရေးပြီး တည်ဆောက်ပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ R compiler ကို အခမဲ့ အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းတွင် ခေါင်းစဉ်ကုဒ်ကို ရေးပြီး ဖွင့်ပါ။ IDLE ကဲ့သို့ R Shell ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး, ကျွန်ုပ်တို့၏ R compiler တွင် ထည့်သွင်းမှုများကို ရယူပါ။
ရေးပြီး တည်ဆောက်ပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ Csharp compiler ကို အခမဲ့ အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းတွင် ခေါင်းစဉ်ကုဒ်ကို ရေးပြီး ဖွင့်ပါ။ IDLE ကဲ့သို့ Csharp Shell ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး, ကျွန်ုပ်တို့၏ Csharp compiler တွင် ထည့်သွင်းမှုများကို ရယူပါ။
ရေးပြီး တည်ဆောက်ပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ Scala compiler ကို အခမဲ့ အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းတွင် ခေါင်းစဉ်ကုဒ်ကို ရေးပြီး ဖွင့်ပါ။ IDLE ကဲ့သို့ Scala Shell ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး, ကျွန်ုပ်တို့၏ Scala compiler တွင် ထည့်သွင်းမှုများကို ရယူပါ။
ရေးပြီး တည်ဆောက်ပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ Rust compiler ကို အခမဲ့ အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းတွင် ခေါင်းစဉ်ကုဒ်ကို ရေးပြီး ဖွင့်ပါ။ IDLE ကဲ့သို့ Rust Shell ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး, ကျွန်ုပ်တို့၏ Rust compiler တွင် ထည့်သွင်းမှုများကို ရယူပါ။
ရေးပြီး တည်ဆောက်ပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ Lua compiler ကို အခမဲ့ အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းတွင် ခေါင်းစဉ်ကုဒ်ကို ရေးပြီး ဖွင့်ပါ။ IDLE ကဲ့သို့ Lua Shell ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး, ကျွန်ုပ်တို့၏ Lua compiler တွင် ထည့်သွင်းမှုများကို ရယူပါ။
ရေးပြီး တည်ဆောက်ပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ Java compiler ကို အခမဲ့ အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းတွင် ခေါင်းစဉ်ကုဒ်ကို ရေးပြီး ဖွင့်ပါ။ IDLE ကဲ့သို့ Java Shell ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး, ကျွန်ုပ်တို့၏ Java compiler တွင် ထည့်သွင်းမှုများကို ရယူပါ။
ရေးပြီး တည်ဆောက်ပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ C compiler ကို အခမဲ့ အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းတွင် ခေါင်းစဉ်ကုဒ်ကို ရေးပြီး ဖွင့်ပါ။ IDLE ကဲ့သို့ C Shell ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး, ကျွန်ုပ်တို့၏ C compiler တွင် ထည့်သွင်းမှုများကို ရယူပါ။
ရေးပြီး တည်ဆောက်ပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ C++ compiler ကို အခမဲ့ အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းတွင် ခေါင်းစဉ်ကုဒ်ကို ရေးပြီး ဖွင့်ပါ။ IDLE ကဲ့သို့ C++ Shell ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး, ကျွန်ုပ်တို့၏ C++ compiler တွင် ထည့်သွင်းမှုများကို ရယူပါ။
ရေးပြီး တည်ဆောက်ပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ Perl compiler ကို အခမဲ့ အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းတွင် ခေါင်းစဉ်ကုဒ်ကို ရေးပြီး ဖွင့်ပါ။ IDLE ကဲ့သို့ Perl Shell ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး, ကျွန်ုပ်တို့၏ Perl compiler တွင် ထည့်သွင်းမှုများကို ရယူပါ။
Image to text converter သည် ရုပ်ပုံအား စာသားအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ခွင့်ပြုသည့် အခမဲ့ OCR ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး, သင်စကင်ဖတ်ထားသော စာသားနှင့် သင်ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်, ကိုးကားချက်များအား ထုတ်ယူပါ, စာသားထည့်ရန်, နှင့် အခြားအရာများ
ဤအရာသည် ပိုင်ရှင်ကို ရှာဖွေရန် ရေပန်းအစားဆုံး ကိရိယာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်- ခေါင်းစဉ်, အင်တာနက် ပံ့ပိုးပေးသူနှင့် မည်သည့် ဝဘ်ဆိုဒ်, ဒိုမိန်း သို့မဟုတ် IP လိပ်စာ၏ တည်နေရာကိုမဆို ရှာဖွေရန်။
China ID Card တစ်ခုစီတွင် ထူးခြားသော ဂဏန်း 18 လုံး နိုင်ငံသား Identity Number ပါရှိပြီး ဤနံပါတ်ကို သိရှိပါက ကိုင်ဆောင်သူ၏ မွေးရပ်မြေ, နေရာနှင့် ကျား,မ
အွန်လိုင်း nslookup သည် ပေးထားသော ဒိုမိန်းအမည်အတွက် DNS မှတ်တမ်းများကို စုံစမ်းမေးမြန်းသည့် ဝဘ်အခြေခံ DNS ဖောက်သည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည် ဒိုမိန်းတစ်ခု၏ DNS မှတ်တမ်းအားလုံးကို စစ်ဆေးနိုင်သည်
curl commands များကို code အဖြစ်ပြောင်းပါ, curl command များကို Go သို့ ပြောင်းပါ, Python, PHP, R, Rust, Node.js, Dart, Strest နှင့် Json
ChinaBank Card စုံစမ်းရေးကိရိယာ, တည်နေရာအကြောင်း, ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဖုန်းနံပါတ်, ဘဏ်အမည်နှင့် ဘဏ်ကတ်အမျိုးအစား
တရုတ်အခွန်ဂဏန်းတွက်စက်။ စုစုပေါင်း အလုပ်အကိုင် ကုန်ကျစရိတ်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ သို့မဟုတ် 2022 ခုနှစ်တွင် သင့်ဝင်ငွေ, လူမှုဖူလုံရေးနှင့် အခွန်ဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုအကြောင်း ပိုမိုရှာဖွေပါ။
တရုတ်နှစ် 5000 ယဉ်ကျေးမှုမှ ထုတ်နုတ်ထားသော အဓိပ္ပါယ်ရှိသော တရုတ်ကလေးငယ်များ အမည်, သီချင်းများ/တန်ကဗျာများ/သီချင်းများ/ယူဖူ/ရှေးဟောင်းကဗျာများ
Chinese Couplet Generator သည် ဤနေရာတွင် သင်၏ တရုတ်စာသားကို ရိုက်ထည့်ပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာသည် သင့်အတွက် လက်ရေးလှဖန်တီးပေးမည်
Chinese acrostic poem generator, ဤမီးစက်သည် ပထမဝါကျ သို့မဟုတ် ကနဦးစာလုံးများကို ပေးသောအခါတွင် တရုတ်ကဗျာကို အလိုအလျောက်ထုတ်ပေးပါသည်။
Chinese ICP filing query tool သည် သင့်အား ဝဘ်ဆိုဒ်ဒိုမိန်းအမည်ဖြင့် တင်သွင်းသည့် မေးမြန်းချက်အား ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဒိုမိန်းအမည်မှတစ်ဆင့်, သင်သည် ဒိုမိန်းအမည်တွင် လိုင်စင်အချက်အလက်ကို တင်သွင်းခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးနိုင်သည်
အခမဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ် ဂုဏ်သတင်း စစ်ဆေးသည့် ကိရိယာ သည် ဝဘ်ဆိုဒ် လုံခြုံမှု ရှိ, မရှိ စစ်ဆေးရန် ဝဘ်ဆိုဒ် နာမည်ပျက် စာရင်း/ အမည်ပျက် ဝန်ဆောင်မှု အများအပြား ပါရှိသည့် ဝဘ်ဆိုဒ် တစ်ခုကို စကန်ဖတ်နိုင်သည်
တိဗက်ကဗျာပုံစံ အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်- စကားပြေတိဗက်ကဗျာများ, တိဗက်ဇာတ်ကြောင်းကဗျာများ, တိဗက်ကဗျာများ , စာလုံးခုနစ်လုံးပါ တိဗက်ကဗျာများ, ဒဿနဆိုင်ရာ တိဗက်ကဗျာများ, သဘာဝတိဗက်ကဗျာများ, ရှေးခေတ် တိဗက်ကဗျာများ, တိဗက်ကဗျာများ။ ကဗျာများ, မွေးနေ့ကဗျာများ, မွေးနေ့ကဗျာများနှင့် အခြားအရာများ!
အလွန်အသုံးဝင်သော အွန်လိုင်း QQ အချက်အလက် စုံစမ်းရေးကိရိယာ, QQ အမည်ပြောင်, ကိုယ်ပွား, မှတ်ချက်များ, လိင်နှင့် အခြားအချက်အလက်များကို ပေးဆောင်သည်။
Byte သို့ KB မှ MB သို့ GB သို့ TB နှင့် back သို့ပြောင်းခြင်းအတွက် သင့်ပြည့်စုံသောဂဏန်းတွက်စက်
ဤအွန်လိုင်း ရုပ်ပုံ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်မှုသည် JPEG, GIF နှင့် PNG တို့ကို ကျဉ်းသွားစေရန်အတွက် အကောင်းဆုံး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် ဆုံးရှုံးမှုချုံ့ခြင်း အယ်လဂိုရီသမ်များ၏ စမတ်ကျသောပေါင်းစပ်မှုကို အသုံးပြုသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ လှပသော, အခမဲ့ အွန်လိုင်း ဂရပ်ဖစ်ဂဏန်းတွက်စက်ဖြင့် သင်္ချာကို စူးစမ်းလေ့လာပါ။ အမျိုးမျိုးသော ဂရပ်များကို ပုံဆွဲခြင်း, ပြသခြင်းနှင့် စုံစမ်းရန် အွန်လိုင်းတူးလ်တစ်ခု။
ဤသည်မှာ ကောင်းမွန်သော Jar obfusticators အချို့ဖြစ်သည်- Pro Guard · yGuard · JShrinker · CafeBabe, Java jar encryption နှင့် obfuscation tools များသည် သင်၏ java အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကို ပြိုကွဲခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်
Allegorical language သည် နေ့စဥ်ဘဝတွင် လူအများအတွက် တရုတ်ဝေါဟာရဖြင့် ဖန်တီးထားသော အထူးဘာသာစကားတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ တိုတို, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ဝါကျတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဖိုင်အကြောင်းအရာအား ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို တားဆီးရန် သင်၏ PDF ကို စကားဝှက်ဖြင့် စာဝှက်ထားပါသည်, PDFEncrypt သည် စံ PDF ကုဒ်ဝှက်စနစ် အယ်ဂိုရီသမ်များကို အသုံးပြု၍ PDF ဖိုင်များကို စာဝှက်ရန် အခမဲ့, open-source utility တစ်ခုဖြစ်သည်
ကုဒ်ဝှက်ထားသော pdf စာရွက်စာတမ်းဖိုင်များကို ကုဒ်ဝှက်ရန် သို့မဟုတ် pdf ကုဒ်ကိုဖျက်ရန်, PDF ဖိုင်များကို ကုဒ်ဝှက်ရန်။ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် မလိုအပ်ပါ, PDF ဖိုင်များကို ကုဒ်ဝှက်ရန် အခမဲ့ PDF ဖိုင်ကို ကုဒ်ဝှက်ပါ။
ဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခုခုကို ထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲ PDF ဖိုင်များမှ စာသားဒေတာကို ထုတ်ယူရန် အွန်လိုင်း PDF မှ စာသားသို့ အခမဲ့နှင့် လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုရန်
TXT ကို PDF Converter, သင်၏ဖိုင်များကို TXT မှ PDF သို့ အရည်အသွေးမြင့် ပြောင်းပါ။ Toolfk ဖြင့် ရိုးရှင်းစွာ ဆွဲယူကာ ပြုပြင်နိုင်သော စာသားဖိုင်များကို PDF ဖော်မတ်သို့ သိမ်းဆည်းပါ။
PDF ကို တည်းဖြတ်နိုင်သော Word စာရွက်စာတမ်းများအဖြစ် ပြောင်းပါ။ PDF မှ Word document တစ်ခုသို့ လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ ပြောင်းရန်, သင်၏ PDF ဖိုင်များကို ယခု ချက်ချင်းပြောင်းပါ
စာရွက်စာတမ်းများကို မူရင်း PDF ဖိုင်အဖြစ် အတိအကျ PDF သို့ Word သို့ ပြောင်းပါ။ Word မှ PDF သို့အွန်လိုင်းပြောင်းပါ, Toolfk ကိုအသုံးပြု၍ DOC သို့ PDF သို့ PDF ဖိုင်သို့အွန်လိုင်းပြောင်းပါ
PowerPoint ကို PDF သို့ ပြောင်းပါ။ PPT နှင့် PPTX ဆလိုက်ရှိုးများကို PDF အဖြစ်ပြောင်းခြင်းဖြင့် ကြည့်ရှုရန် လွယ်ကူစေသည်။ မင်းရဲ့ဖိုင်ကို အပ်လုဒ်လုပ်ပြီး အသွင်ပြောင်း, မင်းရဲ့ PDF ဖိုင်တွေကို အခုပဲ ပြောင်းလိုက်ပါ
ဤအသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး မြန်ဆန်သော PDF converter ဖြင့် PDF ကို PowerPoint သို့ ပြောင်းပါ။ PPT သို့မဟုတ် PPTX ကိုရွေးချယ်၍ PDF ဖိုင်များကို PowerPoint သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်, သင်၏ PDF ဖိုင်များကို ယခုချက်ချင်းပြောင်းနိုင်သည်
အွန်လိုင်းမှ PDF သို့ Excel သို့ပြောင်းခြင်းဖြင့် သင့်အား သင်၏ PDF ကို Excel သို့ ပြောင်းနိုင်စေသည်, သင့်ဖိုင်များကို Microsoft Excel စာရင်းဇယားများအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ PDF သို့ Excel converter ကို အသုံးပြုပါ
Excel XLS စာရွက်စာတမ်းများကို PDF ဖိုင်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် PDF converter, Excel မှ PDF သို့ အွန်လိုင်းသို့ မည်သို့ပြောင်းရမည်နည်း။ သင့်ဖိုင်ကို Excel သို့ PDF converter သို့ ဆွဲချပြီး ချလိုက်ပါ
သင်၏ PDF ဖိုင်ကို HTML ဖိုင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း, အမြန်အွန်လိုင်းဖိုင်ပြောင်းခြင်း service.secure and easy to use!
CodeChef အွန်လိုင်း IDE ဖြင့် သင့်ကုဒ်ကို စုစည်းပြီး လုပ်ဆောင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အွန်လိုင်း compiler သည် Python, C++, C, Kotlin, NodeJS ကဲ့သို့သော programming language အများအပြားကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်
အွန်လိုင်း ဝဘ်ဆိုဒ် ပါ၀င်မှု မေးမြန်းချက်, ပါ၀င်သည့် မေးမြန်းချက်, Baidu ပါ၀င်သည့် မေးမြန်းချက်, 360 ပါဝင်သော စုံစမ်းမေးမြန်းချက် နှင့် အခြားကိရိယာများ ပါဝင်သောကြောင့် သင့်ဝဘ်ဆိုဒ် ပါ၀င်မှု အခြေအနေကို အလွယ်တကူ သိနိုင်စေရန်
Web Port Scanner - ပို့တ်စကင်နာသည် ကွန်ပြူတာကွန်ရက်ပေါ်တွင် ဖွင့်ထားသော ဆိပ်ကမ်းများကို လျင်မြန်စွာရှာဖွေနိုင်သော ကွန်ရက်စကင်နာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဆက်သွယ်ရန်အတွက် ကွန်ရက်တစ်ခုပေါ်ရှိ မည်သည့် port များကို ပြသပေးသည် ။
Priverse IP ကိရိယာကို အသုံးပြု၍ တူညီသော IP လိပ်စာ သို့မဟုတ် ကွန်ရက်ခွဲများ မျှဝေသည့် ဒိုမိန်းများကို ရှာဖွေရန်, IP ကို လက်ခံသူအားလုံး (ဒိုမိန်းများနှင့် ဒိုမိန်းခွဲများ) မှ မျှဝေထားသောကြောင့်
တစ်ချက်နှိပ်မေးမြန်းချက် ဝဘ်ဆိုဒ် Baidu PC မိုဘိုင်းအလေးချိန်, 360PC မိုဘိုင်းအလေးချိန်, Shenma အလေးချိန် အချက်အလက်နှင့် ဝဘ်ဆိုဒ်ခွဲ ဒိုမိန်းအလေးချိန် အချက်အလက် အကျဉ်းချုပ်, သို့မှသာ အကြီးစားရှာဖွေမှုများတွင် သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်ကို အလွယ်တကူ သိနိုင်စေရန်အတွက် အင်ဂျင်အတွင်းရှိ အလေးချိန်တန်ဖိုး။
Whois ဒေတာဘေ့စ်တွင် ၎င်းကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့် ဒိုမိန်းအမည်တစ်ခု၏ရရှိနိုင်မှုကို စစ်ဆေးနိုင်သည်။ DNS, ဒိုမိန်းအမည်များ, အမည်ဆာဗာများ
Zhou Gong ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ လူများသည် ၎င်းတို့၏ အိပ်မက်များမှ အကောင်း သို့မဟုတ် အဆိုးကို ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ အပြည့်စုံဆုံးနှင့် ခိုင်လုံသော Zhougong အိပ်မက်အနက်ပြန်ဆိုချက်အဘိဓာန်ဒေတာ
Li Bai, Du Fu, Wang Wei, Meng Haoran, Li Shangyin, Li Yu, Su Shi, Tao Qian နှင့် အခြားသော ဇာတ်ကောင်များ, ပင်ယင်, အတောက်ပဆုံးနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုထားသော ဂန္တဝင်တရုတ်ကဗျာများ။
Chinese Idioms - Dictionary Chengyu (တရုတ်စကားပုံ idioms) လက်ရေးလှ, ပင်ယင်, အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်, တရုတ်ရှင်းလင်းချက်
တရုတ် ဆန့်ကျင်ဘက်စာလုံးကို ရှာပါ။ စာသားထည့်သွင်းပြီး တရုတ်စကားလုံးတွင် ဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးများ ပါရှိသည့် ဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးများကို ကြည့်ရှုနိုင်သည်
တရုတ်ဝါကျဖန်တီးသူ, ဝါကျထုတ်လုပ်သူ, အကောင်းဆုံးဝါကျဥပမာများစုစည်းမှု။ တရုတ်စာကြောင်းများကို သိန်းနှင့်ချီသော တရုတ်စာကြောင်းများမှ ကျပန်းထုတ်ပေးပါသည်။
အီဒီယမ်များသည် တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု၏ သမိုင်းဝင် သိုက်များဖြစ်သည်။ Idiom Solitaire သည် ရှေးကျပြီး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ဘာသာစကားနှင့် အရေးအသားဂိမ်းဖြစ်သည်
တရုတ်ပုစ္ဆာတွေကို ကြိုက်လား။ ပျော်ရွှင်စရာ တရုတ်ပုစ္ဆာများကို ဖြေရှင်းပါ။ သင့်ဦးနှောက်ကို တုန်လှုပ်စေမယ့် ဒီစိတ်နဲ့ ဆန်းကြယ်တဲ့ ပဟေဋ္ဌိတွေနဲ့ ဟာသလေးတွေနဲ့ စမ်းကြည့်ပါ။
တရုတ်လက်ရေးမူကို လေ့ကျင့်ရန်, တရုတ်ကော်ပီစာအုပ်ကို ထုတ်လုပ်ရန် ကိရိယာတစ်ခု, စာလုံးအချို့ကို ရိုက်ထည့်ကာ pdf မိတ္တူစာအုပ်ကို ရယူရန်